>သူရာနတ်သမီး၏ စလယ်ဆုံး ကကွက်များ | ချမ်းလင်းနေ
>သူရာနတ်သမီး၏ စလယ်ဆုံး ကကွက်များ
Filed under: ကဗျာရှည် —6Comments	February 5, 2011
Greek Goddess of Alchol Mayahuel
(၁)ကမ္ဘာဦးထဲမှာ “ကျောက်ခေတ်ဘီယာခရားများ”* လဲလျောင်းနေ၏။ဤသည်မှာ ဘီစီတစ်သောင်းကျော်မှ သူရာနတ်သမီး၏ အစသူမ ကနဦး ဘယ်ကစလို့…..၊ ဘယ်ကလာ……ဂဃနဏ မသိကြဘုမသိ ဘမသိ ရမ်းတုတ်ကြဘုသိ ဘသိ ဖြေရှင်းကြသူမ အစ ပါရှားကတဲ့… ဒါလည်း ဖြစ်နိုင်သည်သူမ အစ အီဂျစ်ကတဲ့…ဒါလည်း မှန်နိုင်သည်သူမ အစ ဂရိကတဲ့…. ဒါလည်း ထောက်ခံသည်သူမ အစ တရုတ်ကတဲ့… ဒါလည်း နီးစပ်သည်သူမ အစ အိန္ဒိယကတဲ့… ဒါလည်း အလားအလာရှိသည်သူမ အစ ရောမကတဲ့…..သူမ အစ ဘေဘီလုံကတဲ့….သူမ အစ ….သုရာနတ်ပြည်ကတဲ့…..သူမ အစ….သူမ အစ …..အစ….အစနဲ့ …….ဇစ်မြစ်ချ ဆွဲထုတ်လိုက်တာ သူတစ်ပေါက် ငါတစ်ပေါက်နဲ့ ကပေါက်တိ ကပေါက်ချာဘယ်ဟာမှန် ဘယ်ဟာမှား ဝိဝါဒနဲ့ အမျိုးအင်္သချေအယူမျိုးမျိုး သမိုင်းစုံစုံ ကျမ်းထိုထိုမှာ ဖော်ပြလိုက်ကြတာအိုကွယ်…. သူရာနတ်သမီးရေ စချင်သလိုသာ စပါတော့။
(၂)အစပြီးတော့…..အလယ် သူမ၏နာမ……….သူ့အရပ် သူ့အခေါ် သူ့ဒေသ သူ့မူကွဲကြောင့်သူရာနတ်သမီး နာမ….. အမည်လွဲ အုပ်စုများစွာရှိသည်အုပ်စုကွဲ အမည်များစွာရှိသည်အမျိုးတူ သင်းကွဲများစွာရှိသည်အသင်းတူ မျိုးကွဲများစွာရှိသည်အရောင်တူ ပုံကွဲများစွာရှိသည်ပုံစံတူ အရောင်ကွဲများစွာရှိသည်အနံတူ အရသာပေါင်းစုံရှိသည်ရသာတူ အနံကွဲများစွာရှိသည်အခြား…. ခြားသော ဝိသေသနများနှင့်သူရာနတ်သမီး ကကွက်တွေကတော့ဆယ်နှစ်ကြိုး ကဝေ တစ်ကောင်အလားပါပဲ။
(၃)ကောင်းခြင်းနှင့်လည်း သန္ဓေတည်မွေးဖွားဆိုးခြင်းများနှင့်လည်း ကျော်ဇောထင်ရှားယဇ်ပ္ပလင်ထက်မှ နတ်သြဿဓဆေးတဲ့ သောက်လျှင် သေရည်၊ ပြစ်လျှင် ဆေးရည်များပြန်ရင်လည်း မူး၊ နည်းပြန်တော့လဲ ရူးတန်ရင်တော့ ဆေး၊ လွန်လာရင်တော့ ဘေးပေါ့အသူရာမကို သတိသာ ထားကြ မယာအသင်္ချေဖြင့် ရစ်ခွေတဏှာကျွန်အဖြစ် ကျုံးသွင်းထိတွေ့ပေါင်းဖက် ယှက်နွယ်သူအစုံကို သူမခြေရင်း ဝပ်ဆင်းမြေခ ကြွေကျသွားလောက်အောင်ညှိငင်ဆွဲဆောင်လိမ့်မယ်ဖန်ဆင်းစွမ်းဆောင်လိမ့်မယ်ပြုစားခိုင်းစေလိမ့်မယ်အရည်ခြုံ ကကွက်ဆန်းတွေနဲ့ သူမ ကပြအသုံးတော်ခံနေတယ်။
(၄)စပျစ်ချိုရည် ဝိုင်တစ်ခွက် ကြားရုံနဲ့တင် သရေယိုနင့်အရသာ ဘယ်လိမ့်နိုးနဲ့ တမ်းတမိသေးတဲ့ အီဖေကိုမလုံတလုံ အဝတ်အစား ကြော်ငြာနဲ့ မယ်တော်လေးတွေ ဆွဲဆောင်ချက်ဘီယာကိုပဲ အသားပေးကြော်ငြာတာလား မော်ဒယ်ရဲ့ဟန်အပြကြော်ငြာပေလားလူရော ဘီယာရော နှစ်ခုစလုံးကို ကြော်ငြာတော့အမှန်ပဲလ္ဘက်ရည်ဓလေ့ထက် စတေရှင်းဘက် အသားပေးတဲ့ ခေတ်စမ်းအလင်္ကာတေးအလန်းဇယားတွေ အကွက်ချဖို့ရာ ဘီယာဟာ အရက်တော့မဟုတ်ပါ…တငွေ့ငွေ့လေးနဲ့ အတော်လာတာ….ဆိုရိုးလား ကြော်ငြာလား တဘောင်လဲ ဖြစ်နိုင်သည်ယမကာလုလင်တို့ တငွေ့ငွေ့သက်ပျောက်သွားကြငယ်နုစဉ်တုန်းပင် မြေခကြွေကျသွားရနေညိုရင် လေပျိုတယ် နေစောင်းတော့ အဖော်ကောင်းနဲ့အချိန်မနှောင်းခင် ကဲ…သယ်ရင်းရေစင်တင်ဂီတနဲ့ ရောင်စုံအလင်းတွေအောက်အာလူးအရက်တစ်လုံးနဲ့သွားမှောက်ကြဦးစို့။
(၅)အာလူးစား မုတ်ဆိတ်တွေကတော့ ဘုရားသခင်ရဲ့အသွေးတော်ဆန်ကိုစား အာရှသားများအတွက်တော့ ဘုရားရှင်ရဲ့အပြစ်တော်ဘယ်ဘက်က ကြည့်ကြည့် သူ့အိုးနဲ့သူ့ဆန် တန်တာချည်းပဲ။ရှင်ဘုရင် သောက်တော့ ယစ်ရွှေရည်လူကုံထံ သောက်တော့ ယမကာရည်သူဖုန်းစား သောက်တော့ သေရည်ဧကရာဇ်အစ ကုန်သည်အလယ် သူဖုန်းစားအဆုံးဘာအရည်ဖြစ်ဖြစ် သောက်လို့မူးလာရင်တော့ “သူရာမေရိယ”….ပါပဲ။ဆန်ဖြင့် လုပ်သော် ပိဌသုရာ၊မုန့်ဖြင့် လုပ်သော် ပူဝသုရာ၊ထမင်းဖြင့် လုပ်သော် သြဒနသုရာ၊တဆေးဖြင့်လုပ်သော် ကိဏ္ဏပက္ခိတ္တသုရာ၊အသီးအစေ့ဖြင့် ပြုသော် သမ္ဘာရသံယုတ္တသုရာ၊ကျမ်းဂန်လာ “သုရာ= ချက်ရည်”ဟု ငါးမျိုး ဖွဲ့ဆို၏။အပွင့် စိမ်ပြုသော် ပုပ္ပါသဝ၊အသီးကို စိမ်ပြုသော် ဖလာသဝ၊စပျစ်သီး စိမ်ပြုသော် မဓွာသဝ၊ထန်းရည် ကြံရည် ပြုလုပ်သော် ဂုဌာသဝ၊ဖန်ခါးသီး စိမ်ပြုလုပ်သော် သမ္ဘာရ သံယုတ္တာသဝ ဟူ၍လည်း“မေရိယ(ဝါ) စိမ်ရည်” ဟု ငါးမျိုးရှိ၏။အမှန်အမှား ကွဲပြားမသိ မှောင်အတိဖုန်းသော အဝိဇ္ဇာရည်ကိုကျင့်ဝတ်နည်းဖြင့် ဝေရာမဏိ ရှောင်ကြည်ရမည် သူရာခက်ဆစ် နိဂုံးတည်း။
ချမ်းဧအိမ် * Stone Age Beer jugs
သူရာနတ်သမီးဆိုတာ ဂရိဒဏ္ဍာရီထဲက အရက်နတ်သမီး မာယာဟော ဆိုတဲ့ နတ်သမီး အကြောင်းကို ဖတ်မိပြီး “အရက်”ကို နတ်သမီးအဖြစ်နဲ့ တင်စားထားတာပါ။
6 Comments: ahphyulay
February 5, 2011 at 10:33 am	>ကိုလင်း …သူရာ ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ ဆီက သူရသတီ မယ်တော်ဆိုတာကို ပြောကြည့် ချင်တယ်နော်။ သူလည်း တကယ်မရှိပါဘူးတဲ့ ။ လူတွေက ပိတိကတ် သုံးဘုံကို စောင့် ဘို့ ဖန်တီး ထားခဲ့ တာလို့ဆိုပါတယ်။ ဘာသာတိုင်းမှာ ကိုယ်လိုရာကို စိတ်ကူးပုံဖော် ဖန်ဆင်းတာတွေရှိနေပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ဘာသာကတော့အနည်းဆုံး လို့ ထင်ပါတယ်။ ပို့ (စ) နဲ့ဆိုင်ပါ့ မလားမသိ။ပြောချင်ရာ ပြောခဲ့ ပြီနော…။
February 5, 2011 at 11:15 am	>သူရဿတီဆိုတာ အပြင် ၃၇ မင်း အတွင်း အတွင်း ၃၇ မင်းမှာ သူက အပြင် ၃၇ မင်းမှာပါတယ်ဗျ ပါချင်တဲ့နေရာပါဗျာ ကျွန်တော်ကတော့ မယုံဘူး လှိုင်ဘွာ(သီချင်းအိမ်)မှတ်ချက် ။ ။သူရနတ်သမီးအားသောက်လို့ ရပါသလားဘာပဲပြောပြော သူရာရေ တည်ထွင်ခဲ့သူများကိုကျေးဇူးတင်၏အဘယ်ကြောင်းဆိုသော်ယခု ဘရန်ဒီသောက်ပြီး ကွန်မန့် ရေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်။ခင်မင်လျက်.. 🙂
February 5, 2011 at 2:15 pm	>မင်္ဂလာပါ…ကိုချမ်းလင်းနေ…ကျောက်ခေတ်ဘီယာခွက်ကလည်း…အကြီးကြီးပဲနော်…တစ်ခွက်ကိုမနည်းသောက်ရလောက်တယ်…အော်…ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့…ငယ်စဉ်က…ဘူးသီးရေဘူးကို…သွားသတိရမိတယ်…ဘူးသီးရေဘူးဆိုတာ…ဘူးသီးကိုအစေ့ထုတ်ထား…ကြက်ခိုးပေါ်တင်…နောက်တော့မှရေထည့်…သောက်…ကောင်းမှကောင်း…သောက်ဖူးသူသိပါလိမ့်မယ်…
February 5, 2011 at 10:05 pm	>အစ်ကိုချမ်းလင်းနေရေ အစ်ကိုအစဖော်လို့ လား ဒါမှမဟုတ် တရုတ်နှစ်ကူးနဲ့ များတိုက်ဆိုင်လို့ လား သူရာအရက်ကြောင်းတွေတော်တော်များများ ကွန်မန့် တတ်လာတယ် .. နော်. ..ကျွန်တော်အပါအဝင်ပေါ့ ကိုဇော်ကလည်း ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ ဆိုပြီး ထပ်လုပ်ချလိုက်သေးရဲ့ အခုမှ သူ့ အကြိုက် ကိုယ့်အကြိုက်တွေပေါ်ကုန်ပြီ . .ဟေးဟေး
February 10, 2011 at 1:41 pm	>ကျွန်တော်ရဲ့ ဒီပိုစ်အောက်က ကွန်မာန့်လေးတွေမှာ ဘာဖြစ်မှန်းမသိပဲ Malware တွေ ဖြစ်သွားလို့ နမြောတသစွာနဲ့ပဲ ဖြုတ်ပြစ်လိုက်ရပါတယ်။ ကွန့်မာန့်ပေးခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေအပေါင်းကိုလည်း စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲ ကွန်မာန့်လေးများ ဖြုတ်ပြစ်လိုက်ရတာ ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါလို့ တောင်းပန်ချင်ပါတယ်။
February 13, 2011 at 6:31 am	>မင်္ဂလာပါကိုချမ်းရေ..သူရာအကြောင်းတော်တော်လေ့လာထားတာဘဲ။ဗဟုသုတအဖြစ်ဖတ်ရှုသွားပါတယ်။
« >ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက် ဆိုတဲ့ ဧကံဖြိုး
>မိဘနှင့် သားသမီးဆိုး »